जीवजन्तुलाई प्राकृतिक परिवेश- विविधा - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २८, २०७६ कमलजङ्ग कुँवर
हामीले राणाहरूको जहानियाँ शासन, फञ्चायती शासन र शाही शासन विरुद्ध मुक्ति आन्दोलन गर्‍यौं  । त्यसैगरी महिला, दलित, कमैया, हलिया, मधेस, जनजाति मुत्ति आन्दोलन लगायत विविध मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी भयौं  ।
यसको अर्थ हामी अरुको बन्धनबाट मुक्त हुन चाहन्छौं । बन्धनमा बस्नु कष्टकर भएर नै हामीले त्याग, बलिदान, लडाइँबाट मुक्ति हासिल गर्‍यौं र अझै कैयन प्रयत्न जारी छन् । एकातिर हामी आफ्नो मुक्तिको कुरा गर्छौं भने अर्कोतर्फ आफैं अरुलाई बन्धनमा पार्न चाहन्छौं । हाम्रो लागि मुक्ति प्रिय लाग्छ भने अरु प्राणीका लागि पनि त्यो अपरिहार्य हुन्छ । हामी आफू भने मानव अधिकार, बाल अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनौं । तर हामीजस्तै अन्य प्राणीको पनि बालअधिकार र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने अधिकार हामीलाई कसले दियो ?
हामीले कुकुर, बँदेल, मृग, सुगा, मयुर लगायत थुप्रै जनावर र चराहरू पालेको देखेका छौं । जनावर पालकलाई यी जनावर किन पाल्नुभएको भनी सोध्यो भने सोखको लागि भन्छन् । मानौं, कुनै धनाढ्यलाई अरु मानिसको बच्चा ल्याएर खोरमा राखेर पाल्ने सोख भयो रे । तपाईका छोराछोरीलाई तपाईसँग जबर्जस्ती खोसेर पाल्न लैजान्छु भनी लगेर खोरमा राख्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ ? अरुलाई बन्धनमा राख्नु सोख होइन, कुचेष्टा हो । मनोवैज्ञानिकहरूको एक किसिमको मानसिक रोग नै हो । मैले एउटा कवितामा पढेको थिएँ, ‘प्राणीको हत्या र हिंसा दानवताको प्रतीक हो, करुणा र दया मानवताको रीत हो ।’ हामी आफ्नो इन्द्रिय सुखका लागि अरुलाई बन्धनमा पार्ने प्रयास गर्दैछौं । हामी मुक्तिको कुरा गर्छौं, तर आफ्नै इन्द्रियका बन्धनमा हुनु इन्द्रियको दास हुनु हो । हाम्रो नीतिशास्त्रले भन्छ–
अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।
हामी त वसुधैव कुटुम्बकम्को नीतिमा चलेको समाजमा हुर्केका मानिस हौं । हाम्रो सभ्यता त आफ्ना बन्धुबान्धव मात्र मेरा हुन् भन्ने संकुचित विचारबाट होइन, पृथ्वीका सम्पूर्ण चराचर जगत, मानिस र प्राणीलाई हामी आफ्ना साथी, मित्र र आफन्त मान्ने उदार विचारबाट प्रशिक्षित भएर आएका हौं ।
बँदेलले बच्चा जन्माएपछि मानिसहरूले झाडीमा बच्चा समात्न गाह्रो हुने हुँदा जंगलमा डढेलो लगाइदिन्छन् । माउ, बच्चालाई लखेट्दै माउ र बच्चालाई अलग गर्ने अनि बच्चा समात्ने । जंगलमा डढेलो लाग्दा जंगली जनावर, रुखबिरुवा, अपार प्राकृतिक सम्पदामात्र विनाश हुन्छ होला भन्ने सोच्ने गर्छौं ।
यसले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने सोच्दैनौं । नजिकको बस्तीमा आगो सर्दा जीउधनको क्षतिमात्रै हुने होइन, वर्षात्को समयमा बाढी, पैरो, भूक्षय हुने र जमिनमा पानीको सञ्चितिमा ह्रास आउँदा हिउँदमा खानेपानी र सिंचाइको लागि आवश्यक पानीको अभाव हुन्छ । त्यस्तै सुगाले परभक्षीहरूबाट आफ्ना बच्चालाई सुरक्षित राख्न अग्लो रुखमा गुँड बनाउँछ । यसो गरेर उसले जंगली परभक्षीबाट आफ्नो बच्चालाई त जोगायो, तर पृथ्वीको सर्वोत्कृट प्राणी मानिसजस्तो परभक्षीबाट जोगाउन सकेन, मानिसले सुगाको बच्चा समात्न जंगलको ठूलो रुख काटिदिन्छ ।
तपाईंले कुकुरको छाउरो, बँदेल, सुगा र मयुरको बच्चालाई जतिसुकै मिठो खानेकुरा दिए पनि, जतिसुकै नरम विछ्याउनामा राखे पनि, जतिसुकै माया गरे पनि ती बच्चालाई आफ्नो आमाको सामिप्यता नै प्यारो हुन्छ । सुत्केरी आमालाई कहिल्यै रमाइलो लाग्दैन कि आफ्ना बच्चा आफूबाट जबर्जस्ती खोसेर अन्तै लगेकोमा । तपाईले पालिरहेका जनावर र चराहरू आमाबाट जबर्जस्ती छुट्याएर ल्याइएका बच्चाहरू हुन् ।
ती आमा र बच्चाको क्रन्दन, चित्कार साथै असह्य पीडा र वेदनाले धिक्कार्दै उसको आत्माले हामीलाई श्राप दिन्छ । तपार्ई आफू एकपटक नवजात शिशु र सुत्केरी आमा भएर सोच्नुस् त । तर यहाँ कुकुर किन पाल्न नपाउने कस्तो खालको लेख हो यो भन्न सक्नुहुन्छ ।
कुकुरको बच्चा कम्तीमा १६ हप्तापछि मात्र तपाईले आमासँग छुट्याउनु उसको बाल अधिकारको हिसाबले जायज हुनसक्छ ? जसरी हामीलाई आफन्त, छिमेकीसँग बस्न आनन्द आउँछ, अरु प्राणीलाई पनि आफ्नो बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीसंगीसँग बस्ने रहर हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ । हुर्केको कुकुरलाई पनि खोरमा थुन्दा वा साङ्लोले बाँध्दा उसको मनोभाव कस्तो हुन्छ, कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ ? के त्यसो गर्दा ऊ खुसी भएको देख्नुहुन्छ ?
आम मानिस अहिले वन्यजन्तु पालनमा लालायित हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा वन्यजन्तु पालन गर्न पाउने प्रावधान थप गरी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्न सबै आतुर देखिन्छन् । कतिपय वन प्राविधिकसमेत कहिले वन्यजन्तु पाल्न पाइन्छ भनेर आतुर छन् । नेपालमा वर्षेनि अर्बौंको मासु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । तर हामी बाख्रा पालेर मासुमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नेहरू मृग पालेर समृद्ध हुन्छौं भन्नु ‘आमाको लाम्टो चुसेर भएन, बाउको घुँडो चुस्’ भनेजस्तै हो । मृग, कालिज घरपालुवा हुन योग्य भएको भए उहिल्यै हाम्रा जिजुबाजेहरूले पालिसक्थे । वन्यजन्तु पालन गर्न न हामीसँग ज्ञान, सीप छ, न औषधी र डाक्टर नै छन् । कुखुरा पालन गरेको वर्षौं भयो र त महामारी लाग्यो भने न औषधी छ, नत डाक्टर नै उपलब्ध हुन्छन् । भोलि मृग, कालिजमा पनि महामारी आयो भने व्यवसायीको के हालत हुन्छ ? वन्यजन्तु पालेर करोडपति हुने सपना देख्नेहरू प्राणीले दिएको श्रापले रोडपति हुन पनि बेर लाग्दैनन् ।
वाग्मतीको माछा– रक्सीलाई चटनी खानका लागिभन्दा नदीको पानीको शुद्धताको सूचकका लागि हो । जुन दिन वाग्मतीमा माछा लस्कर लागेको देख्नेछौं, त्यो दिन वाग्मतीको पानी पिउन र पौडी खेल्न सकिने हुनेछ । वाग्मतीको पानी शुद्ध भएको हेर्न काठमाडौंमा आउने पर्यटकको भिड धान्न सकिने छैन । काठमाडौंको आर्थिक विकासमा यो कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । काठमाडौंमा घर–घरमा सिसाका पोखरीमा वाग्मतीको पानीमा जति माछा पाले पनि केही अर्थ छैन, अर्थ वाग्मतीमा एउटामात्र माछा जीवित हुनुमा छ ।
हामी जति धेरै मांसाहारी हुँदै जान्छौं, एकातिर हामीमा प्राणीमाथिको दयाभाव नाश हुँदै जान्छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक मासु सेवनले हामी रोगी र क्रोधी हुँदै जान्छौं । व्यत्ति तथा समाजका लागिमात्र होइन, पृथ्वीको भविष्यका र मानव अस्तित्वका लागि पनि सतोगुणी भोजन नै हितकर छ । शास्त्रमा ‘जीव जीवस्य भोजनम्’ भनिएको छ । बाघको लागि अर्को जीव, मृग, बाख्रा र शाकाहारी पशुका लागि घाँस हो भने हामी मानिसका लागि अन्नबाली, सागसब्जी, गेडागुडी, दूध, दही, फलफूल नै हो ।
जनावरलाई ६–८ केजी अन्न खुवाएपछि १ केजी मासु उत्पादन हुन्छ । मानिसले उस्तै परे एक छाकमा १ केजी मासु एक्लै खाइदिन्छ । ६–८ केजी अन्न पकायो भने करिब २०–२५ जना मानिसलाई पेटभरि एकछाक खान पुग्छ । अन्न उत्पादनका लागि कृषिभूमि बढाउन वन फँडानी गरिन्छ ।
सिंचाइ गर्न डिप बोरिङ गर्दा पृथ्वीको जल भण्डारण रित्तिँदै जानु, जनावर पालनबाट उत्पादन हुने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि पानीको उपयोग यी सबै वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा मानिस मांसाहारी हुँदा समाजमा भोकमरी, रोगव्याधि, अशान्ति मात्र हुने होइन, मानव अस्तित्वका लागि पनि घातक देखिन्छ । जहाँ तपाई जन्मनुभयो, जहाँको स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी र खानेकुरा खाएर तपाई जीवित हुनुहुन्छ, त्यही पृथ्वीको अत्यधिक दोहन गर्ने तपाईप्रति के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? जहाँबाट स्वच्छ पिउने पानी आइरहेको छ, त्यहीं डोजर लगाउने, वन विनाश गर्ने तपार्ई कस्तो बुद्धिमान हो ?
जंगली जनावर घरमा पालेपछि जंगलमा त्यसको संरक्षण हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको हुनसक्छ । तर अहिले घरपालुवा भइसकेका बाख्रा, भैंसी, कुखुरा, घोडा, हाँस, भेडा, गाईको संख्या त्यसो भए जंगलभरि हुनुपर्ने होइन र ? यो त खालि घरमा पालेको छु भन्ने नाममा जंगलको सिध्याउने दाउमात्रै हो । अहिले पनि लुकीचोरी जंगली जनावर मारिरहेको सन्दर्भमा भोलि आफूले पालेको हो भन्ने बहानामा जंगलबाट मार्दै–बेच्दै गर्ने यो प्रपञ्च मात्रै हो ।
‘वेदमा अहिंसा परमो धर्म’ भनिएको छ । हाम्रा कविहरूले कवितामार्फत दयाभावबारे गहिरो सन्देश दिएका छन् । हामी सबैले पढेकै हौं, ‘दया नै हो, पृथ्वीको अति चहकिलो पारसमणि ।’ कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले चरीको विलापमा लेखेका छन्, ‘म मर्ने हो मर्छु, तर तिमी नराम्रोसँग चुक्यौ ।’ पिँजडाको सुगामा सुगाको वह, वेदना, रोदन, क्रन्दन पढेका हामीले नै स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बासस्थानमा रमाएका वन्यजन्तु, चरालाई हाम्रो पिँंजडामा कैद गर्दैछौं ।
हामीले बाल्यकालमा विद्यालयमा पिँजडाको सुगा, चरीको विलाप पढ्दा हामीभित्र जुन दया जागेको थियो, भित्रैदेखि हाम्रो मन छोएको थियो, त्यो कुरा हामीले किन यति छिटै बिर्स्यौं ? हाम्रो मानसपटलमा विद्यालयमा पढेको त्यो क्षणलाई स्मरण गरौं र एकपटक फेरि यी कविता खोजेर पढौं । अनि मात्र वन्यजन्तु पालन गर्न पाउने अधिकार कानुनमा राख्नु उचित हो वा होइन भनेर मात्र निर्णय गरौं ।
लेखक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ ०८:५३